Mọnde, Febụwarị 1, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
E nwere abụ Lady-ga-ga nke na-anọ ebe ahụ ihe dịka otu afọ akpọrọ dị nnọọ Dance. Enweghị m ike iwepu ya n’isi m. Adịghị m nnukwu onye ofufe nke Ga-ga-ooh-la-la… mana ihe niile dị n’elu 40 mere ka nwa m nwanyị tụgharịa redio ma bido ịgụ egwu. Enweghị m ike ịkwụsị ma abụ abụ.
Naanị Dance dị ka ọ bụ abụ maka ikekwe ịbụ obere ndụmọdụ ma ọ bụ ịpụ na-agba egwu ma hapụ ya. dị nnọọ Dance!
Izu a a na m na New Orleans na-eme okwu sprint (m + sprint = na-akpa ọchị) maka Webtrends Gbanye ogbako. Ozi mbu m maka ulo oru ndi choro iru oru ha site na ịde blọgụ bu ka ha di niru. Ha kwesịrị ịga n’ihu n’ihu n’ozi ọma ha na-ezi. Ha kwesiri ịpụ n’ihu n’iji soshal midia. Ha kwesiri ịpụ n’ihu n’igwe nyocha. Kedu? Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ileghara ihe ndọpụ uche niile anya na dị nnọọ Dance ọ bụrụ na ọ gbasara Social Media. Nweta a ụzọ, pụọ n'ala ma gbuo.
Gaghị enweta ntụpọ site na ịbụ okooko osisi.
Tupu m hapụ ọdụ ụgbọ elu dị na Indianapolis, enwetara m email site na otu onye ọrụ m zutere izu ole na ole gara aga. Ndị White House kpọrọ ya ka ọ zute Onye isi ala n'ihi okwu mkpali ọ na-eme na obodo ojii. Akụkọ nke ya dị ịtụnanya na ozi ya abụghị ihe ị ga - eche… ọ sị na 2010 bụ njedebe ngọpụ maka ndị mmadụ iji nweta ịdị ukwuu ha. Agaghị ebukwasị ndị ọzọ ụta, onye ọ bụla ga-egwu ala miri emi ma bie ndụ kwekọrọ na ikike Chineke nyere ha. Nke ahụ bụ incredibly ike ozi maka onye ọ bụla… bụghị naanị ndị pere mpe na mba a.
Nke bụ eziokwu bụ na ọ dị mfe karị iji ndụ anyị na-eme ihe nne na nna anyị, ndị nkuzi anyị, gọọmentị anyị gwara anyị… gbalịsie ike, zụta ihe nzuzu, wuo 401k. Na ụgbọ elu m na-eri ihe Linchpin: You Dị Oké Mkpa?. Ugbu a ndị mmadụ enweghị ọrụ, 401k ha agaala, ha tufuru ihe nzuzu ha… o doro anya na ọnọdụ otu a bụ nnukwu ụgha na akụkọ ntolite America.
Seth Godin dere,
Nanị ụzọ ị ga-esi nweta ihe ị bara uru bụ ịkwado, ịrụsi ọrụ ike nke mmetụta uche, ịbụ onye a hụrụ dị ka ihe dị oke mkpa, yana ịmịkọrịta mmekọrịta nke otu na ndị mmadụ nwere nnukwu mmasị.
Kwụsị igwu egwu site na iwu ma na-agbaso ọnụ ọgụgụ na-enweghị ngwụcha nke cogs ndị ọzọ (okwu Seth Godin) bụ ndị butere obodo a na onyinye niile dị na ikpere na akụnụba anyị. Choo niche gi, egela ndi naysayers… wepu aka gi na ala ịgba egwu ma maa jijiji.
Enwere m olileanya na egwu a ga-arapara gị n'isi ugbu a…